August 12, 2020 2224
काठमाडौँको गो’ङ्गबुमा यही साउन २५ गते रोल्पाका कृष्णब’हादुर बोहराको घटनाको रहस्यको केही पाटो सार्वजनिक भएको छ । एक महिलाले ज्यान लिए’को खबर खुलिसकेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरीय अ’पराध नियन्त्रण महाशाखाले गरेको प्रारम्भिक अनु’सन्धानमा पूर्वीचितवनकी कल्पना मुडभरी पौडेल एक्कैलै ती पुरुषको ज्यान लिएकी हुन् । श’व व्यव’स्थापनमा भने उनले आफ्नै छोरी’लाई साथ’समेत लिएको खुलेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए ।
जोजो नामको कुकु’रको सहयोगमा अनुसन्धान गरिएकाले प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धानलाई ‘जोजो अपरे’शन’को नाम दिएको छ । घटना यही साउन २४ गते रातिको हो । साउन २५ गते बिहान ०७ बजे काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–१० गोङ्गबुस्थित नवज्योती मार्गमा कालो रङ्को सुटकेशभित्र आधा शरीर भेटीए पछि घटना प्रहरीले अगाडी बढाएको थियो ।
घटना परिवारले थाहा पाएप’छि अहिले रुँ’दै मिडि’यामा आएका छन् । आमा केही अघिसम्म घरमा एक्लै बस्दै आएकी छन् भन्ने खबर पाएको जानकारी दिए।
कृष्णबहादुरका दुई पत्नी छन् भन्ने पनि उनले बताए। भारत बस्ने क्रममा ६-७ वर्षअघि उनले दोस्रो बिहे गरे’को शान्तराजको भनाइ छ। कृष्णब’हादुरकी एक जना दिदी पनि छिन्। इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीले कृष्णबहा’दुरकी दिदी कमला र भिनाजु भक्त’बहादुर घर्तीलाई डाकेर उनका बारेमा सोधपुछ गरिरहेको छ।
भक्तबहादुरसँग हामीले पनि कु’रा गर्यौं। उनले कृष्णबहादुरकी जेठी श्रीमतीको मा’नसिक सन्तुलन ठिक नभएको र कान्छी श्रीमती ‘ओम् शान्ति’ मा लागे’र भारत बस्ने गरेको जानकारी दिए। ‘कान्छीबाट ८ वर्षजतिको एउटा छोरा छ,’ घर्तीले भने, ‘जे’ठीबाट जन्मेको छोरा पनि भारतमै बस्छ भन्ने सु’निन्छ।’
काकाको छोरा र भिनाजुसँगको कुराका’नीबाट हामीले के थाहा पायौं भने, कृष्णबहादुर रोजगा’रका लागि विदेश गएका रहेछन्। उनी अफगानिस्तान, इराक लगायत देश पुगे। केही समय भारतमा पनि बसे। ‘दाङ, काठ’माडौं र भारत आवतजावत गरि’रहन्थे भन्ने सुनेको थिएँ,’ शान्तराजले भने, ‘पछिल्लो समय के काम गर्थ्यो भनेर हामी अनभिज्ञ थियौं।’
भक्तब’हादुरले पनि पछिल्लो समय उ’नी के काम गर्थे थाहा नभएको बताए। ‘गत वर्ष तिहा’रदेखि मैले भेटेको थिइनँ। त्यसअघि पनि कहिले के गर्छु भन्थे कहिले के भन्थे,’ उनले भने, ‘उनी के ‘काम गर्दै थिए भन्ने नै हामीलाई थाहा थिएन।’
यो पनि पढ्नुहोस् ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस् यहाँ थिचेर
इलाका प्रहरी कार्या’लय होलेरीका निरीक्षक मेघनाथ चापागाइँले कृष्णबहादुरका भिनाजु र दिदीसँग घट’नाबारे सोधपुछ गरेको बताए। ‘उहाँहरूले गत वर्ष ति’हारदेखि भाइलाई नभे’टेको बताउनुभएको छ,’ चापा’गाइँले भने, ‘अरू कुरा बुझ्न बाँकी नै छ।’
Prevह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्
Nextसुनको मूल्य तोलामा ६ हजार घट्यो, अब कति पर्छ तोलाको ? हेर्नुहोस्
दुई दिनदेखि हराइरहेका दाजु विजय र भाइ सङ्गम पौडेल मृ’तावस्थामा फेला परे
सन्तोष देउजा आमासहित पहिलोपल्ट मिडियामा, यस्तो कुराले धर-धरी रोय सन्तोष (भिडियोसहित)